Sidee loo helaa codka tayo sare leh ugu fiican ee ugu dhiiran? | Show Top
Sidee loo helaa codka tayo sare leh ugu fiican ee ugu dhiiran?
Tallaabooyinka soo socda ayaa ku siin doona audio tayada cad oo aan lahayn buuqa iyo Bass wanaagsan iyo seddex punchy.
Waxaad isku dayi kartaa tallaabooyinka soo socda ay diiwaan muunad. In aad saamiga ka tago 3-5 seconds in bilowgii iyo dhammaadka. waxaad dhahdaa “Sidee ayaad ku ogaan in aan u socday si ay u leeyihiin rooti looska qado?” tusaale ah. Ka dib markii aad leedahay saamiga diyaar aynu sameeyo soo socda si kor loogu qaado codka si tayada sanqadha fiican.
Firkradahaan isticmaalaan qalab hawadda ay u xoojin audio ah. Dooro saamayn dibna kombaresarada
Radidiyaha lagu qoro si aad u hubiso in isbedelka la soo.
2. Next waa in qaylada saarto laga bilaabo iyo dhammaadka duubay.
Muujinta bilowga duubay ka hor inta aad bilowdo hadlayay.
Dooranaysaa Saamaynta –> Hoos u Qaylada iyo riix badhanka profile qayladii
Hadda dooro duubo oo dhan adigoo gujinaya double meel kasta oo ka dhiiran software.
Dooro Saamaynta –> Hoos u Qaylada
Waad beddeli karaan goobaha ay guji eegis ama aad nuqulka kaliya goobaha ay ka hoos ku qoran oo ka dibna riix OK
3. Isticmaal saamayn ek'eysiiyo in la beddelo jidka vocals dhawaaqi. Tusaale ahaan this ogolaanaysaa ku dar qaar ka mid ah Bass, ka dibna qaar ka mid ah seddexda koob.
Dooro oo dhan ee aad duubo by double magcaabo meel kasta oo la ruxruxo. Dooro Saamaynta -> Ek'eysiiyo
Dooro Yididiilo Bass ee Select qalooca hoos-hoos ugu hooseysa.
Dooro oo dhan oo duubista ah oo taga si Raadka –> Sinnaanta. Markan dooro Yididiilo koob ka mid ah liiska daadiyaa qalooca Select. Click OK.
4. Waxaad yareyn kartaa wax danbow ba'an ee ka dhawaaqa adigoo isticmaalaya Limiter adag ee
Dooro saamaynta –> Hard Limiter
Isticmaal goobaha hoose iyo riix OK.
5. Bal aan sameeyo tayada codka buunkii adigoo isticmaalaya caadiga ah. Dooro Raadka –> Normalizes. Click OK.
YouTube No comments Item Jaishi
← Sida loo sameeyo dabaaldegyo gool Pro Evolution Soccer 2016 (PES 2016) Sidee Buur files img in VirtualBox? →
Ku biir 23 macaamiishu kale